Uyini isiqinisekiso ebhange, futhi kanjani it
Sasebhange - lena enye indlela yokunikeza sokubolekwayo. Eqinisweni - lena isiqinisekiso for umboleki. Kodwa wamyala sesikweletu. Bank wenza kuthengiselana njengoba umuntu onikeza isiqinisekiso kubo umbolekisi (ohlomulayo). Endabeni ka okuzenzakalelayo izibopho umboleki (thishelanhloko), yisiboniso okhokhela izikweletu zakhe.
Yisiboniso, kanye namabhange angasebenza futhi izinkampani zomshuwalense. Ikhono ukukhipha iziqinisekiso ezinjalo kufanele abhalwe out in the ilayisensi ukuhlinzekwa kwemisebenzi.
A isiqinisekiso ebhange inganikelwa njengenkolo esemthethweni kanye ngokomzimba (kuphela uma usomabhizinisi ngamunye). Cabanga ngendaba umuntu wemvelo.
Kungaphansi kwaziphi izimo bangathembela isiqinisekiso ebhange?
1. Uma une-akhawunti kule ebhange, futhi isebenza.
2. Uma ngokuphindaphindiwe wakhipha loans ebhange, futhi une umlando omuhle credit.
Iziqinisekiso ikhishelwa uthishanhloko incwadi isiqinisekiso. Futhi uyazifeza lena akuyona khulula. Le ncwadi yayithi sewaranti, inani lemali futhi izimo kungashiwo "isiyasebenza" ngaphansi kwazo.
Ukunikeza isiqinisekiso ebhange kungenzeka eqoqweni kwemibhalo lolu hlu olulandelayo:
ulwazi inani engenile (ezinyangeni eziyisithupha);
ikhophi yerekhodi umsebenzi;
Imibhalo zetayitela impahla e impahla (ingcebo, izimoto, izibambiso, njll). Uma isiqinisekiso ebhange ngaphandle eseduze, le mibhalo akudingeki ukunikeza.
Uhlu angase kulekelelwa kuncike nezidingo ebhange ethile.
Uma kuza isikhathi lapho lo muntu obolekayo engakhokhi loan yomuntu obolekisayo, lona wamuva udalula imfuneko ngoba ebhange yisiboniso. Ibhange ukhokha isiqinisekiso - futhi manje izikweletu umboleki iqhubekela ebhange yisiboniso.
I isiqinisekiso ebhange ungaboshwa loan ethize noma icala. Uma benganikezwa credit eyodwa yasebhange, bese ungakwazi ngokunenzuzo le isiqinisekiso kusukela kwelinye ibhange. Ngisho noma ngabe unazo sokukhokha imali ebolekiwe, kanti isikhathi esibalulwe isiqinisekiso ongakabi sasiqhubeka, sisasebenza futhi ungakwazi futhi bazishaye isifuba sakhe.
IBhange bangaphinde isiqinisekiso yayo (kulesi simo kumele ezinjengalezo ezabhalwa kufanele). Kodwa ukwenza kanjalo unelungelo ukuba ngaphambi nje kokuba umbolekisi nabantu abacabanga kanjalo imfuneko.
Kuye okukhethwa kukho incwadi isiqinisekiso sokukhokha yilezi ezilandelayo yokwahluka yawo:
Sinemibandela isiqinisekiso - isiqinisekiso sokukhokha senzeka phezu ngesicelo umzuzi.
Okunemibandela isiqinisekiso - isiqinisekiso sokukhokha njengoba kucelwe ebhange, kodwa uma imibhalo eqinisekisa isidingo le nkokhelo.
Ukuhlinzekwa kwezinsiza iziqinisekiso - ezikhishwa eziyinhloko senzuzo yisibambiso impahla.
isiqinisekiso Ukuthengiswa - lena lapho isenzo boleko guarantors amabhange eziningana.
Ngaphezu kokunikeza credit, sasebhange kungenziwa ikhishwe ukuze:
Ukuhlanganyela amathenda indali. Kuyinto isiqinisekiso izinhloso ezibucayi umhlanganyeli kanye saziso inkokhelo imigomo yenkontileka uma ngokuwina lo mncintiswano.
Inkokhelo yesivumelwano. Ukwenza isiqinisekiso sokukhokha umphakeli kwezimpahla noma amasevisi enanini elihlongozwe inkontileka.
Lena kuphela lwezinhlobo ezivame kakhulu isiqinisekiso.
ERussia, lolu hlobo isibambiso kuze kube yilapho siqala ukuthola ukuthandwa. Ngakho-ke, lapho ebhekisela ezinhlekeleleni lolu hlobo software kufanele sinake ukubhaliswa efanele yezomthetho kuthengiselana.
Bank "St Michael": isisebenzi kanye ikhasimende Izibuyekezo
Trust imisebenzi - Iyini? Izibonelo Themba Operations
Sinxusa Savings Bank. ATM: kokuthola imali
Izinhlobo zezimiso yemali
Bhala Kazan amabhange kanye nezinsizakalo yabo: ukukhetha okungcono
Uthi bewazi nje ukuthi umuntu onjalo?
Ukuklama nokulinganisa amadokhumenti yikuphi? Umyalelo wokuthuthukiswa, ukuqaliswa nokuvunywa
Man-Lion: indlela siqonde ukuthi unguMuntu othandweni, ngokuvumelana nezimfuno ehlukahlukene
Yini "Greenpeace" iqoqo. inhlangano i-International "Greenpeace"
Izinkambo Okudumile e-India
Yiziphi ukwelashwa amakhambi abantu sofuba khona